Kedu ihe kpatara Drones ji agba ụgbọ elu ụgbọ elu Korea?
Location: Mbido » Ịdee » Obodo | Mpaghara » South Korea » Kedu ihe kpatara Drones ji agba ụgbọ elu ụgbọ elu Korea?
Maka ọtụtụ ụgbọ elu, drones bụ ihe egwu nchekwa. Ọ bụghị maka ụgbọ elu ndị otu Sky Tea. Ụgbọ elu Korea na-efega n'obodo 120 dị na mba 43, na-ewe mmadụ 20,000 ọrụ, ma buru nde mmadụ 27 na 2019. Ụgbọ elu Korea ga-adabere n'ezie na drones ma ọ bụ ka mma nke drones iji mee ka nlekọta ya dịkwuo mma.
Korean Air, nwere ahụmahụ dị ukwuu na mmepe ụgbọ elu nke mmadụ na nke na-enweghị onye, ​​ewepụtala teknụzụ nke nwere ike nyochaa ụgbọ elu site na iji ụgbọ mmiri drone.
Korean Air mere mmemme ngosi maka teknụzụ nyocha ụgbọ elu site na iji drone swarms na Disemba na hanga isi ụlọ ọrụ ụgbọ elu.
Nyocha ụgbọ elu Drone agbanweela ụkpụrụ nlekọta ma ndị ụgbọ elu na-ebute ya gburugburu ụwa. Ebe ndị ọkachamara na-arụzi ọrụ na mbụ ga-eme nlele anya nke fuselage ụgbọ elu site na ịdị elu ruru mita 20, nyocha nke drone na-eme ka nchekwa ebe ọrụ dịkwuo mma ma na-enye ohere maka mmụba na ọsọ ọsọ.
Teknụzụ nyocha ụgbọ elu Korea Air bụ nke mbụ n'ụwa na-ebuga ọtụtụ drones n'otu oge, na-ebelata oge mmezi yana nkwụsi ike ọrụ na-abawanye nke ukwuu.
Ụgbọ elu ahụ ewepụtala drone nke nwere obosara na otu mita n'ịdị elu, na-eru kilogram 5.5. Enwere ike inyocha fuselage ụgbọ elu site na iji anọ n'ime drones ndị a n'otu oge. Ụlọ ọrụ ahụ ewepụtakwala mmemme ọrụ nke na-enye ohere ka e hazie drones anọ ka ha see foto nke ebe ndị a na-emebu ụzọ. Ọ bụrụ na otu n'ime drones anaghị arụ ọrụ, a na-ahazi usoro ahụ ka ọ rụọ ọrụ na-akpaghị aka site na iji drones fọdụrụnụ.
Mgbe a na-arụ ọrụ drones anọ n'otu oge, oge nlele anya nke ihe dị ka awa 10 nwere ike ibelata ihe dị ka awa anọ, mbelata pasent 60 n'oge, nke a ga-enye aka kwalite ọrụ ụgbọ elu n'oge. Ọzọkwa, drones, nke a na-eji igwefoto arụ ọrụ dị elu, nwere ike ịchọpụta ihe ruru 1 mm n'ogo, na-enye ohere iji chọpụta ntụpọ micro nke a na-apụghị ịhụ site n'elu site na anya gba ọtọ.
Korea Air na-ekekọrịta data nyocha site na igwe ojii, na-enyere ndị ọrụ aka ịlele nsonaazụ nyocha n'ebe ọ bụla na oge ọ bụla. Ụgbọ elu ahụ etinyewokwa usoro iji zere nkukota na ngere geo-fencing iji dobe ebe dị nchebe site na ụlọ ọrụ ndị gbara ya gburugburu ma gbochie nkwụsịtụ na mpaghara ozi.
Na mgbakwunye na ịmepụta teknụzụ ọhụrụ a kwekọrọ na amụma gọọmentị iji mee ka asọmpi nke ụlọ ọrụ ụgbọ elu MRO sikwuo ike, ụgbọ elu ahụ emegharịwokwa ụkpụrụ iji melite usoro nlekọta drone dị ka ịchọ ọnụnọ nke ndị ọrụ nchekwa na mgbakwunye na ndị ọkwọ ụgbọ elu na ndị injinia.
Korean Air ga-arụ ọrụ iji melite nchekwa na ịdị mma maka ndị ọrụ, mee ka ọrụ guzosie ike ma mee ka nyocha nke ọma site na ule na-aga n'ihu tupu ịmalite ọrụ nyocha drones n'afọ ọzọ.
Morocco maliteghachiri ụgbọ elu ndị njem na mba ọzọ
Ụgbọ elu Atyrau na Istanbul na Air Astana ugbu a
Njem na-aga Europe na-amaliteghachi
Pọdkastị ọhụrụ na mgba anyị na-enwe maka ịrahụ ụra
Mba kachasị elu n'ụwa nwere ọrụ kacha mma ...
Ụgbọ elu ọhụrụ anaghị akwụsị akwụsị n'etiti Belagavi na Nagpur na Star...
Ekpughere nzuzo nzuzo onye nwe oge
Ezinụlọ onye Las Vegas agọnarị ọgwụgwọ ọrịa kansa…
Azụmaahịa Njikọ Wheel Fifth guzoro na-eto na 5.7%…